Kedu ka esi tinye ihe nkiri Agba Nchedo?
Ọ bụrụ na ị ga-etinye PPF, enwere nhọrọ ole na ole - mana n'agbanyeghị nke ị họọrọ, ọ bụ mgbe niile a ọkachamara ọrụ. Imirikiti ndị ọkachamara PPF na-etinyekwa vinyl ma ọ bụ ọrụ akpaaka ndị ọzọ. Largerlọ ọrụ buru ibu na-eji igwe a na-akpọ onye na-akpa nkata - nke na-egbutu vinyl ahụ na ngalaba nke na-eme ka ịwụnye dị mfe na nhazi.
Agbanyeghị - a na-amanye imirikiti ndị ụlọ ọrụ nrụnye PPF iji nnukwu mpịakọta ihe nkiri, nke na-eme ka usoro nrụnye ahụ sie ike ma na-eduga n'ọtụtụ ihe efu. The nwụnye usoro bụ mgbe niile pụrụ iche na ahaziri dabeere na ika ma ọ bụ agba nchedo film; dị ka onye ọ bụla na-emepụta ihe nwere usoro dị iche iche ha kwadoro.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ntinye PPF na-eso usoro ndị a:
Hichaa ma dozie elu ala. Imirikiti installers na-eji ezigbo ọrụ na-ebelata ihe mkpofu, mana iwepu wax ma ọ bụ polish. N'ezie, ụfọdụ ga - emecha wax na polish zuru ezu tupu ị wụnye iji melite nchapụta.
Bee ihe PPF iji kwado akụkụ. Ozugbo etinyere agba ụgbọ ala, onye nrụnye ga-ebipụ ihe PPF maka nwụnye. O yikwara na imewe windo. Ọtụtụ mgbe, ha ga-etinye ya na ngalaba, dị ka mkpuchi, ogwe aka, panel nkeji iri, enyo akụkụ, ọnụ ụzọ, ma ọ bụ akụkụ ọzọ na-erughị mita ise. Mgbe ha gbubiri ihe nkiri a, ha ga-edozi ya ma kwadebe maka ntinye.
Gba kwesịrị ekwesị ngwọta. Installwụnye PPF chọrọ onye na - arụ ọrụ - nke a na - akpọ ihe kwesịrị ekwesị. Nke a na-enye PPF ohere ịrụ ọrụ “ihe yiri nke”, nke bụ ihe na - akpata ya ịrapara n’elu ala agba. Ọzọkwa, dabere na akara nke PPF, ihe ngwọta dabara adaba nwere ike ịdị site na mmiri dị mfe na ihe yiri ncha.
Dabara adaba na itinye. Nke a bụ ebe ahụmịhe ahụ batara. PPF adighi adaba nke oma mgbe etinyere ya. N'ezie, ọ dị ọtụtụ ihe mgbagwoju anya ịwụnye karịa vinyl. Usoro nke ịwụnye PPF gụnyere usoro spraying - squeegee - na ịmegharị PPF. Mgbe ọ nọ n'ọnọdụ ziri ezi, onye nrụnye ga-eji squeegee wepu afụ ma ọ bụ creases na fim ahụ.
Icha. Ozugbo etinyere PPF, niile egosipụta na creases na-arahụ, ikpeazụ nzọụkwụ bụ ihicha ma ọ bụ okpomọkụ-rụọ ọrụ. Ha na-eji egbe egbe etolite etolite nke na-eme ka njigide ahụ wee mee ka PPF rapara n'ahụ ya. Ọ na-ewepụkwa ihe ndị ahụ ma mepụta ihe dabara adaba.